Iingcebiso kwi-Image Optimization ukusuka kwi-Semalt
Siphila kwilizwe elibonakalayo, kwaye ukubaluleka kokucwangciswa komfanekiso akunakunakwa. Imifanekiso esemgangathweni yenza ukuba iwebhusayithi yakho ibonakale kwaye iqhube iinqwelo zendlela. Ngaphandle komxholo ofanelekileyo kunye nokwenza ngcono imifanekiso, awukwazi ukufumana iziphumo ezifunwayo. Ukulungiswa komfanekiso kunceda ngeendlela ezininzi, umzekelo, kunika amava omsebenzisi angcono, kuthintela ixesha lomthwalo wephepha lakho kwaye unikezelo olukhethiweyo lokukhetha - uk surveillance equipment. I-teknoloji yokukhangela ebonakalayo yenza inxaxheba evelele ezinyangeni zamva nje, kwaye iinjini zophando azikwazi ukuchonga umxholo wemifanekiso. Ngoko, baxhomekeke kwisicatshulwa semifanekiso yakho ukuqonda ukuba imifanekiso imayelana nokuthi njani ihambelana nezihloko okanye amanqaku. Nazi iziphakamiso ezibonakalayo zokuxhobisa umfanekiso kwi-webmasters kunye neeblogi ezibonelelwa nguMax Bell, uMphathi weNtengiso kuMqhubi we-10 (Semalt .
Imifanekiso ye-Stock ayikwazi ukunceda kwi-SEO:
Ukuba ufuna ukuba imifanekiso yakho ifake kwiwebhusayithi, kufuneka ube nokufikelela ngokupheleleyo kwimifanekiso yesitokisi. Kodwa imifanekiso ye-stock ayikwazi ukuncedisa kwi-SEO kuba uya kufuneka uqhubeke kunye nephepha le-SEO ngokuhlukileyo. Iindawo ezininzi zinemifanekiso efanayo yesitokhwe, ngoko kufuneka ucinge ngemifanekiso ekhethekileyo neyekrakra engazange isetyenziswe. Nangona xa imifanekiso yesitokethi ilungisiwe, iya kuba nempembelelo efanayo okanye i-SEO inzuzo njengemifanekiso yasekuqaleni.
Sebenzisa iimpawu eziphezulu:
Kubalulekile ukusebenzisa iimpawu ezizodwa kunye nezona ziphezulu kuwo onke amanqaku akho. Imifanekiso emininzi emitsha oyisebenzisayo, bhetele iziphumo zakho zikwahlula kwiinjini zokukhangela..Iifoto zangaphambili zithetha ukuba kufuneka usebenzise iifoto ezingenamfanekiso. Ukuba awukwazi ukufikelela kwiShutterstock okanye i-Getty Images, unokuthatha iifoto zangaphakathi usebenzisa ikhamera. Nika iindwendwe zakho ngolwazi oluninzi malunga nekhaneli yakho, kwaye oko kunokwenzeka kuphela ngevidiyo kunye neefoto ezikhangayo.
Nika abathengi bakho ngcamango yenkampani yakho, okanye unikeze umfanekiso womgangatho ophezulu oza kubakho kwiindwendwe.
Abasebenzisi abaninzi banakuwunaki imifanekiso yezithuthi. Imifanekiso yokuqala yekhwalithi ikuvumela ukuba uphume kwimiphumo yokukhangela, bonise ubuntu bakho kwaye ukhange abantu abaninzi kwiwebhusayithi yakho.
Kungakhathaliseki ukuba imifanekiso oyikhethile, kufuneka uqiniseke ukuba imifanekiso ikhululekile ukuyisebenzisa, kwaye akukho mbambano yokubambisana. Ukuba unako ukufikelela kwiShutterstock, Getty Images, DepositFiles okanye ezinye iiplatifomu ezifanayo, ungasebenzisa ezininzi iifoto njengoko ufuna ngaphandle kokukhathazeka malunga nokulwa kwe-copyright. Kodwa ukuba awunayo ilayisenisi yokusebenzisa imifanekiso yazo, kuya kufuneka uhlangabezane necala elibizayo. Ngaphantsi kwe-DMCA (uMthetho we-Digital Millennium Copyright Act), abasebenzisi abakwazi ukusebenzisa umxholo womntu kunye nemifanekiso njengoko kungaphula imibandela ye-copyright.
Kukho iindlela ezahlukeneyo zefomathi, kodwa i-JPEG iyona ifomathi ifanelekileyo kwaye isetyenziswe ngokubanzi. Unika ezininzi iinketho zokugcina umgangatho wemifanekiso yakho xa ushicilelwe okanye uxinzezelwe. Ungadlala ngemibala, iipateni, kunye nezithunzi ukuze uqinisekise ukuba umfanekiso wokugqibela ufana nesakhiwo sakho sesayithi kunye nomxholo. Kuyinyaniso ukuba imifanekiso ye-JPEG kulula ukuyicindezela kwaye ingasetyenziselwa zombini ngobukhulu obukhulu kunye nobukhulu.
Xa kuziwa kwi-SEO, kubalulekile ukubiza imifanekiso yakho. Kumelwe wenze amagama amfutshane kodwa anemifanekiso yemifanekiso yakho kwaye uqinisekise ukuba igama eliphambili longeziweyo kulawo magama. I-Google, i-Yahoo kunye ne-Bing iya kukhwela umxholo wakho kunye nemifanekiso ngokukhawuleza ukuba ngaba amagama angundoqo kunye namazwi asetyenziswa ngokufanelekileyo.